YESUS ISA DINQIISIISA
← Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu
Nuyi Waaqayyoof in hojjenna →
Namooni amantiitti qabamani hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu.
Yesus inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu waan namooni jedhan kanan wal hin fakkatu. Waan inni hojjechuuf deemu salphati hin tilmamuu. Namooni bara sana, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduu turan. Yesus immo Waaqayyo cubbamoota akka jaallatu mul’ise. Isaan ‘Waaqayyo nama fuula guree adeemu (serious ta’e)’ jaallata jedhani yaaduu turan. Yesus immo Waaqayyo akka waan nama gammachiisu—gammachu—uume mul’ise. Isaan Waaqayyo waan aadan ykn muka abbootan qabame itti fakkata ture. Inni garuu akka Waaqayyo waan haaraa fedhe—akka inni waan haaraa hojjetu agarisiise.
MAREE: Mee yeroo itti waa’ee Kristos Yesus barte yaadii. Yesus Kristos maal fakkata jete yaadaa turte?
MEE ITTI YAADII: Yesus Kristosin beekun jireenya eega siif ta’e warri isa hin beekiin ammam akka isaan miidhamaan tilmaamuu ni danda’ama?
SEENSA: Kutta keenya isaa Luuqaas 5:17-39 keessatti seena diniqii ta’an sadi argina. Dubbi isaa dubbi jabana duri mootiin biyya Ingliz, ‘amantii ati labsiitu dukka yoo buune maal argana’ jedhe ergama wangeela tokko gaafaanaan, “Yaa Mootii, dinqii dinqii irratti argituu. Dinqiin kun hundino immo waan gaarii dha” jedhe debbise fakkata.
Mee Luuqaas 5:17-26 dubbistti akkata seenan kun itti rawwatame tilmami. Yeroo namchi naafi isa gar-tokko du’e kun fuula Yesus duratti gad-bufame namooni seena keessa jiraan (namichi naafi, michooti isaa, warii Fariisota fi Barsiissota, warii dubbi kana ilallan, l. 17-19) maaltu itti dhaga’ame seetaa?
Namichi dhukuffatan sun michoota fi Yesusiin ammam amanachu qaba yaalii ciima akkasi fudhachuuf jette yaadaa?
Michoota namciha jaalalla fi o’ina ammam namicha kanaf qabu? Michooti akkasi bara keenya keessa ni argama lataa?
Warri dubbi kana to’atani attam dinqiifatu lataa?
Akkata Yesus namicha naafa kana simate, ammam nama achi jiru hundumaa dinqiisiise sitti fakkata (l. 20)? Gochaan isa kun waa’ee Yesus fi akkata inni itti gaafii keenya debbisu maal dhugaa ba’a?
Yesus maaliif waa’ee dhukubba namicha dhiise waa’ee dhiifamu cubbu isaa dubbate?
Dhifama cubbu kennu immo dukuba fayyisutti salpha dha? Namaaf? Waaqayyoof?
Barsiisoti Seera Yesus dhifamu cubbu waan kennefiif kun waan Waaqayyo duwwan gochuu danda’u jedani isaa qeeqaan (l. 21). Debbin Yesus waa’ee kana maal agarsiisaa (l. 22-26)?
Lakkobsa 27-32 dubbis mee. Lewwin qaraxxoota jibaman keessa isa tokko. Maaliif Yesus nama kana waamuun isa Lewwiin immo isa dukka bu’un isa nama diinqa (L. 27-28)?
Yeroo Lewwiin ciidha qopheese irratti Yesusn waame, warii geggesoota amantii ta’an Yesus “cubbamoota” waliin nyaata jedhani isa muufatan. Yesus akka ogeessa qorichaatti (l. 30) ofi ilallun isa attamitti illalcha isaan Waaqayyoof qabaniin morma?
Mee dubbi kana gad-faggesii itti yaadii: ogeessa qorichaa ….dhukuba …. Dhukubsata ßà Fayyisa (Yesus) ….cubbu …cubbama
Duka buutooni Kristos kana irra maal barachu qabu jetta?
Illalcha sirii hin tain attamitu Yesus nuuf akkan dhiima hin basne godha jette yaadaa?
Illalchi akasi nuunis gooftaf kan dhiima hin basine nuu gochuu danda’u isa mee xinxalii.
Lewwiin booda Wangeela isa keessatti (Wangeela Maattewos) Yesus “cubbamoota wajjin nyaata”—michuu cubbamoota ti—jedhe barressa. Harkiiso /dhifamu attamitu michuu ta’u fi ogeessa qorichaa ta’u giddu jira?
Lakkofsa 33-39 tti dubbis. Yesus yeroo waa’ee somuu dhabu dukka buutoota isa qeeqamu (l. 33) ofi isaa akka dhirsa misirroo ti ofi ibsa (l. 34-35). Jechi isa kun firoma inni dukka buutota isaa waliin qabu maal ibsaa? Attamitti akka isaan ofi illalani barbadaa?
Yesus ammas fakkeenyan dubbata (l. 36-39). Uffata haaraa fi waynii haaraan maal mul’isu? Uffata moofaa fi qodaa bososaan maaliif dhabatuu?
Waan Yesus karaa adda addaa barsiise kun akkata itti Yesus namoota fi haalaa hunduma haareesuu maal sii barsiisaa?
Kutta kana keessatti waa’ee Yesus maal caalaatti barate?
Waaqayyoof addan ba’un dubbi fi jireenyaan isa mul’isuuf. Yoo waamamuuni fi Waaqayyoof addan ba’un hojji fi kenna Waaqayyo irratti hunda’u isa hiranfate dhiima isa waa’ee ofi ofi godha. Dhiimi isa immo waa’ee Waaqayyo isa “irra-daddarbaa namootaa itti lakkaa’uu dhiisee, karaa Kristos biyya lafaa ofitti araarse” (2 Qor 5:19) ti. Mee dubbi kana gad-faggesii xinxalii.
Mee dubbi kana gaditti jiru qalbeefadhu:
Yesus Kristos (Waaqayyo) damee rakko keenya utuu hin tane, hidaa isaa bira ga’e hiika itti nuuf kennu barbadaa. Namchi dhukubfate kun cubbamadha jechu utuu hin tane, dukkubi garuu hida cubbu irra dhufe. Cubbuun yeroo hiika argatu, dhukubiis hiika argata.
Yesus, akka ogeessi qorichaa dhukubba jibbe dhukubsta immo fayyisu, cubbu jibbetu cubbama garuu fayyisaa.
Warri Fariisota namoota “addan bahani” dha. Garuu illalchi issanii sirii waan hin ta’iniif Yesus isaa Waaqayyoon mul’isuuf dhufe simachu dadhaban. Illalchi keenya akka Waaqayyo ala nu hin gooneetti ofi illaluun baayye barbachiisa dha.
Hojjiin Waaqayyo yaadaa fi jireenya haaraween duwwa hojjetamu danda’a. Daadhii waynii haaraa qodaa bososaatti hin naqan, qodaa haaraa isa hojji haaresuuf qopha’eetti naqu male.
Yesus Isa Dinqiisiisaa — 1 Comment
samuel wangelu on February 4, 2015 at 7:54 am said:
JABAADHAA! GOOTAAN ISIN HAAEEBBISU